Afhayeenka baarlamaanka federalka oo cambaareeyey xayiraaddi xubno baarlamaan oo ka dhoofi lahaa Muqdisho. – Radio Daljir
Maajo 10, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, May 10 – Afhayeenka baarlamaanka federaalka ah ee Somaliya Shariif Xasan Sh. Adan ayaa si kulul u cambaareeyey xayiraddii xukuumaddu shalay saartay xubno ka tirsan guddiga doorashada ee baarlamaanka, kuwaas oo loo diiday inay ka dhoofaan garoonka Adan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Shariif Xasan oo maanta shir jaraa?id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay intaasi tahay mid ka hor imaanaysa Axdiga KMG ah ee dawladdu ku shaqayso, ayna tahay in tallaabo laga qaado kuwa falkaasi sameeyey.
Waxa uu ku eedeeyey Xukuumadda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga in ay isbaaro u dhiganayso baarlamaanka, ayna taasi tahay wax laga xumaado oo aan la aqbali katin. Xubnaha la xayiray shalay ayaa u socdaya magaalada Nayroobi ee dalka Kenya si ay uga qabgalaan siminaar halkaasi lagu qabanayo.
Ciidamo ka tirsan Puntland oo ku sii jeeday Galgala oo dhexda dagaal ku qabsaday.